သေမင်းတမာန် ဓါတ်တိုင် (သို့) ရေ သတိပြု
From -DVB entertainment
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံတော်တွင် အများပြည်သူလိုက်နာနိုင်ရန်
စေ ထုတ်ပြန် ထားသော ဆောင်ပုဒ်များအနက် “လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ ဒို့ရန်သူ” ၊ “ပြည်ပအားကိုး ပုဆိန်ရိုး” ၊ “သင့်သွေးဖြင့် အသက်ကယ်ပါ” ၊ “ကျန်းမာခြင်းသည် လာဘ်တစ်ပါး” ၊ “သင့်ကြောင့် မီးမလောင်ပါစေနှင့်” ၊ “မီးသတိပြု” စသည့် ဆောင်ပုဒ်များစွာရှိပေသည်။ ၇.၈.၂ဝ၁၂ (အင်္ဂါ)နေ့တွင် “ရေ သတိပြု” ဟူသော ဆောင်ပုဒ်တစ်ခု ထပ်မံထုတ်ပြန်ရမည့် အနေ အထားတရပ်သို့ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပြီဟု ခေါ်ဆိုရတော့မည်။ အကြောင်း မှ မြန်မာနိုင် ငံတွင် မိုးရာသီဖြစ်သည်နှင့်အညီ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုကြောင့် အရပ် ဒေသအချို့၌ ရေကြီးခြင်း ၊ ရေလျှံခြင်း တို့ ဖြစ်ေ ပ်ါလျှက်ရှိ သည်။ ရေဘေးဒု က္ခ သည်များ၊ အိုး/
အိမ် ပစ်ရသည့် ဒုက္ခသည်များ၊ စားရေးသောက်ရေးခက်ခဲသူများ များစွာဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိ သည်။
At 8/08/2012 07:39:00 PM No comments:
၈၈ အဖွဲ့ဆီ ဦးသိန်းစိန် ဘာသတင်းတွေ ပို့လိုက်သလဲ
၈၈၈၈ ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံ ငွေရတုအကြို ၂၄ နှစ်ပြည့် အခမ်းအနားကို ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေကဦးဆောင် ပြီး မန္တလေးမြို့၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ အလယ်တိုက်ကြီး၊ ဒက္ခိဏာရာမဘုရားကြီးကျောင်းတိုက်မှာ ဒီကနေ့ ကျင်းပခဲ့ ကြပါတယ်။အခမ်းအနားအတွက်လိုအပ်တာတွေ မနေ့က ပြင်ဆင်နေတုန်း ကိုမင်းကိုနိုင်အပါအဝင် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေ အံ့သြစရာ အဖြစ်တခု ပေါ်လာပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ၂ ဦးဖြစ်တဲ့ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်းနဲ့ မီးရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းတို့ အခမ်းအနား
At 8/08/2012 06:59:00 PM No comments:
မြောင်းမြဒီချုပ်ပါတီဝင်အချို့ ပါတီတွင်း မကျေနပ်မှု ဆန္ဒဖော်ထုတ်မည်
ရန်ကုန်၊ သြဂုတ် - ၈မြောင်းမြမြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဝင်များက ပါတီတွင်း မကျေနပ်မှုများရှိ၍ ဆန္ဒပြမည်ဖြစ်ကြောင်း ၄င်းပါတီဝင်များက 7Day News သို့ ဆက်သွယ်ပြောကြားသည်။မြို့နယ်နှင့် ခရိုင်ကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းရာတွင် မကျေနပ်မှုများရှိပြီး၊ ဗဟိုကော်မတီ ဆုံးဖြတ်ရာတွင်လည်း ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်း မကျ၍ ဆန္ဒပြမည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးမြင့်ကျော်ကပြောသည်။''မြို့နယ်နဲ့ ခရိုင်ကော်မရှင်ဖွဲ့တာမှာ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သင့်၊ မဖြစ်သင့်၊ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သင့်၊ မဖြစ်သင့်၊ အဲဒီ့ကိစ္စတွေ အခု ဖွဲ့စည်းထားတွေတာကို မကျေနပ်လို့ပါ"ဟု ၄င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။ထိုသို့ ဆန္ဒပြရန်အတွက် မြောင်းမြမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက "ပါတီတွင်းဖြစ်တဲ့ ကိစ္စဆိုတော့
At 8/08/2012 06:57:00 PM No comments:
DDoS နဲ့ ရင်ဆိုင်ကြရ၀ယ် ( When We Face DDoS)
At 8/08/2012 06:01:00 PM No comments:
ကုလ ကိုယ်စားလှယ်ခရီးစဉ်အား အစိုးရက ပိတ်ပင်မှုအချို့ ပြုလုပ်ခဲ့
စံခလပူရီ (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ကုလသမဂ္ဂ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ သောမတ်စ် အိုဂျေး ကွင်တားနား ၏ ခြောက်ရက်ကြာ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်း လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေများ သွားရောက်လေ့လာရန် ခွင့်တောင်းထားသည့် နေရာအချို့အား မြန်မာအစိုးရမှ ခွင့်မပြုခဲ့ဟု ကွင်တားနားက ပြောသည်။သြဂုတ်လ ၇ ရက်နေ့က မဲဆောက်မြို့၌ မြန်မာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် မစ္စတာကွင်တားနားက ထိုသို့ပြောကြားသွားခဲ့ကြောင်း ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့သူ တဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
At 8/08/2012 05:52:00 PM No comments:
ဦးတည်ရာ လမ်းကြောင်း ပျောက်သွားခြင်းတဲ့လား
ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာန၀ဘ်ဆိုက်မှာ ဖေါ်ပြထားတဲ့ သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်း အတွင်းက ဖြစ်ပွာခဲ့တဲ့ ဂျာနယ် ၂ စောင် အပိတ်ခံရ တဲ့သတင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပြန်လည် ရှင်းပြထားတာပါ။
ဖတ်ချင်ရင် ဒီကို သွားပါ။
At 8/08/2012 04:53:00 PM No comments:
Black Hack, White Hack များအစိုးရနှင့် ပူးပေါင်း၍ မြန်မာ့ Cyber လုံခြုံရေး တာဝန်ယူပေးရန်
From - တစ္ဆေနယ်ပယ် ၀ဘ်ဆိုဒ်
ယမန်နေ့က ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ အင်တာနက် စာမျက်နှာအား အီဂျစ်၊ အာရပ်နှင့် အခြား မွတ်ဆလင် ဟက်ကာများ ပူးပေါင်း၍ တိုက်ခိုက် ခဲ့ကြသည်ဟု နေပြည်တော် သတင်း တစ်ရပ်တွင် ဖော်ပြ ထားပါသည်။Egyptians Hacker Group နှင့် Arabian Black Hat Team Hacker အပါအ၀င် မွတ်ဆလင် Hacker Group များ ပူးပေါင်း၍ တိုက်ခိုက် ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ဆက်လက်၍လည်း Cyber Attack ပြုလုပ်လျှက် ရှိနေကြောင်း အဆိုပါ သတင်း၌ ဖော်ပြ ပါရှိ ပါသည်။Arabian Black Hat Team Hacker အဖွဲ့သည် ရုရှား၊ ဆီးရီးယား၊ အီဂျစ်နှင့် အခြား အာရပ် နိုင်ငံများမှ မွတ်ဆလင် Hacker များ ပူးပေါင်း ဖွဲ့စည်း
At 8/08/2012 04:30:00 PM 1 comment:
New Face Model Babe Maung in Hot Fashion Dress
At 8/08/2012 04:26:00 PM No comments:
ဘင်္ဂါလီတွေကို မွတ်စလင်နိုင်ငံတွေက ခွဲဝေလက်ခံဖို့ တင်ပြမည်ဆို
From - BoonMyoMyo Facebook
သတင်းကောင်း !!!! ဘင်္ဂလီ-ရိုဟင်ဂျာတွေ မနေ့က ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဘက် ဝင်ပြေးသွားတာ အခု ဘင်္ဂလား စစ်သားတွေ မမောင်းထုတ်ေ တာ့ဘူးတဲ့....လက်ခံနေပြီတဲ့....ဒီထက်ကောင်းတဲ့ သတင်းတ ခု က ရှေ့လမှာ OIC ဋ္ဌာနချုပ်ဆော်ဒီမှာ မူဆလင်နီုင်ငံများ ညီလာခံ လုပ်မယ်.....အဲဒီညီလာခံမှာ ထိုင်းတောင်ပိုင်းက အရေးရယ်....မြန်မာပြည်က ရိုဟင်ဂျာအရေးရယ် အဓိကဆွေးနွေးမယ် တဲ့....အဲဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ ရေမြောကမ်းတင် ဘင်္ဂလီတွေကို မူဆလင်နိုင်ငံများက တတ်နီုင်သလောက် ခွဲဝေလက်ခံဖို့ အချက် ကို တင်ပြသွားမယ်ဆိုပဲ့....ကျေးဇူးကမ္ဘာ အဘိုင် တို့.....မာမူတို့ရေ. .....မြန်မြန်နိုင် သလောက် မြန်မြန်သာ ခေါ်သွားကြပါ....ကျေးဇူးမေ့ပါဘူး.....(နေ့လည်ဘက် Thai PBS-ထိုင်းသတင်းမှ)
At 8/08/2012 04:19:00 PM5comments:
ကချင်ပြည်နယ် မိုးညှင်းမြို့နယ်အတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှုများရှိနေ
ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးညှင်းမြို့နယ်၊ နမ်းမားေ ကျးရွာ၊ တောင် အင်းကျေးရွာ၊ နန့်ဆော်ေ လ်ာကျေးရွာတွေမှာ မူးယစ်ဆေး ၀ါး ရောင်း/၀ယ်/သုံးစွဲသူများ နေ့စဉ်ေ န့တိုင်း ရှိနေကြကြောင်း နမ်းမားေ ကျးရွာ စည်ပင် သာ ယာဈေး အတွင်း ဒေသ ခံပြည်သူ အချို့မှ ပြောပါ တယ် ။မူးယစ်ေ ဆး ၀ါးေ ရာင်း/၀ယ်သူတွေ ဟာ ကျေး ရွာတွေနဲ့ (၂)မိုင်ခန့် အ ကွာမှာ ရှိ တဲ့ တောစပ် ၊ ချောင်းစပ်များ အနီးမှာ ရောင်း/၀ယ် မှုများ ပြုလုပ်ကြတယ်။ ဒီလိုရောင်း ၀ယ်ရင်လည်း
At 8/08/2012 03:54:00 PM No comments:
အစိုးရအဆက်ဆက်ကျူးလွန်ခဲ့သည့် အကျင့်ပျက်ခြ စားမှုများကို အရေးယူရန် အဖွဲ့ဝင် ၁၅ ဦးပါဝင်သော လာဘ်ပေး လာဘ်ယူမှု ပပျောက်ရေး ကော်မရှင် တရပ်ကို သမ္မတ ဦးသိန်း စိန်က ဖွဲ့စည်းသွား ရန်ရှိကြောင်း သိရသည်။ အမျိုးသား လွှတ်တော်တွင် အတည်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်သော လာဘ်ပေး လာဘ်ယူမှု ပပျောက်ရေး ဥပဒေကြမ်းကို ပြည်သူ့ လွှတ်တော်တွင် မကြာမီ ဆွေးနွေး အတည်ပြုသွားမည် ဖြစ်ပြီး သြဂုတ်လကုန်တွင် ဥပဒေအဖြစ် ထွက်ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းဥပဒေအရ
At 8/08/2012 03:39:00 PM No comments:
မြန်မာ စစ်တပ် မှ လှိုင်ဇာကို တင့်ကားများဖြင့်ထိုးစစ်ဆင်ပြီ
From - Lachid Kachin facebook
(သြဂုတ်လ၊ ၈၊ ရက်)
KIA, တပ်မဟာ (၅)ဒေသ၊ ဂျာဘူရွာ တွင်စစ်အင်အား လာရောက်စုဆောင်းထားသော မြန်မာ အစိုးရ စစ်တပ်၊ စစ်ကြောင်းများ သည် ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ဂျာဘူရွာ မှ ဂန်ဒေါင်ယာန် ဘက်သို့ ထိုးစစ်ဆင် ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာ သော ကြောင့်KIA, တပ်မဟာ (၅)အုပ်ချုပ်နယ်မြေဖြစ်သော ဂျာဘူရွာ နှင့် ဂန်ဒေါင်ယာန် တွင် မြန်မာ အစိုးရ စစ်တပ်နှင့် KIA တပ်မဟာ (၅) တပ်ဖွဲ့ ၀င်တို့ ကြား ယနေ့နံနက်ပိုင်း (၈.၈.၂၀၁၂)မှ စတင်၍ အပြင်းအထန် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားနေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ၄င်းမြန်မာ အစိုးရ စစ်ကြောင်းသည် KIO, ဋ္ဌာနချုပ်ဖြစ်သော လှိုင်ဇာမြို့၊ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ရန်အတွက် စစ် တင့်ကား၊သံချပ်ကာ ကား တို့ ဖြင့် ထိုးစစ်ဆင် ချီတက်တိုက်ခိုက်နေ သည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလဲ ထပ်မံသိရှိရပါသည်။
At 8/08/2012 03:01:00 PM No comments:
တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်များ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု့ပါ ထည့်သွင်းသင့်ကြောင်း NLDလွှတ်တော်အမတ်ပြော
“သမ္မတကြီး၏ ပိုင်ဆိုင်မှု စာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာရန် ညွှန်ကြားချက် တွင် တပ်မတော် ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များနှင့် ပ တ်သ က်၍ မပါ ရှိကြောင်း ၊ အုပ်ချုပ်ရေး ပိုင်းတွင် တာဝန် ယူထားကြ သူများဖြစ် သဖြင့် ထည့်သွင်းသင့်ကြောင်း”
At 8/08/2012 02:35:00 PM No comments:
From - ElevenMediaGroup
မောင်တောမြို့တွင် လက်ရှိအချိန်၌ လုံခြုံရေးအင်အား တိုးမြှင့်ထားကြောင်း သိရပါသည်။ လုံခြုံရေး တာဝန်ယူမှုကို ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ သာမက မူလက မြို့ပြင်တွင် တာဝန်ယူထားသော တပ်မတော်သား အင်အားကိုပါ အသုံးပြု ထားကြောင်း သိရသည်။ မောင်တောမြို့တွင်း၌ ဗုံးဖောက်ခွဲမည်ဟူသည့် သတင်းများ မြို့ခံများအကြား ပျံ့နှံလျက်ရှိနေပြီး လူစုလူဝေး မဖြစ်စေရန် လုပ်ဆောင်နေကြောင်း သိရှိရပါသည်။ နံနက်ပိုင်း အချိန်က ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော ဈေးဆိုင် အချို့မှာလည်း နံနက် ၁၀ နာရီကျော်ခန့် အချိန်တွင် ပြန်ပိတ် သွားခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။
At 8/08/2012 02:32:00 PM No comments:
ယနေ့( သြဂုတ်လ ၈ ရက်)နံနက် ၇း၀၀ နာရီက ၈၈၈၈အရေးတော်ပုံ ငွေရတုအကြို ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှူပူဇော်ပွဲ အခမ်းအနား(ဓါတ်ပုံ)
From -၈၈ မျိုးဆက်များFacebook
At 8/08/2012 12:53:00 PM No comments:
လွှတ်တော်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရှေ့ဆုံးတန်းရောက်လာ
ယနေ့ ကျင်းပသော ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်း အဝေး တွင်ဒ်ါအောင်ဆန်းစုကြည် သည် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရေးရာကော်မတီ ဥက္ကဌများကို နေရာချထားသည့် လွှတ်တော်ထိုင်ခုံ များ ၏ ရှေ့ဆုံး တန်း သို့ ရောက်ရှိ လာ ခဲ့ပါသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ယမန်နေ့က ဖွဲ့စည်းခဲ့သောတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်း ကော် မ တီ တွင် ဥက္ကဌ အဖြစ် တာဝန်ပေး ခဲ့ပါ သည် ။
At 8/08/2012 12:42:00 PM No comments:
ကမ္ဘာကျော် နိုင်ငံရေးဒဿနပညာရှင် ဖရန်စစ်ဖူကူယားမား မြန်မာနိုင်ငံလာမည်
From -7Days News Journal
ကမ္ဘာကျော် နိုင်ငံရေးဒဿနပညာရှင်၊ စာရေးဆရာ ပါမောက္ခ ဖရန်စစ်ဖူကူယားမားသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ သြဂုတ်လ တတိယ အပတ်အတွင်း ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဖရန်စစ်ဖူကူယားမား သည် မြန်မာနိုင်ငံ သို့ လေးရက် ကြာ လာရောက်မည်ြ ဖစ်ပြီး ရန်ကုန်နှင့်နေပြည်တော်တို့တွင် နှစ်ရက်စီ စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် ချဉ်းကပ်ဆောင်ရွက်ပုံ နည်းလမ်းများနှ င့် ကောင်းမွန်သည့်အစိုးရ တစ်ရပ် တည်ဆောက်ရေး ဆိုင်ရာ စသည့်အကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက် ပြီးဆွးနွေးပွဲများ ၊ဟောပြောပွဲများပြုလုပ်သွားရန် စီစဉ်ထားကြောင်း သမ္မတအကြံပေးအဖွဲ့ မှ နိုင်ငံရေး အကြံပေး ဦးကိုကိုလှိုင် ကပြောသည်။ ၎င်းသည် ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေသည့် ''The End of History and the Last
At 8/08/2012 12:34:00 PM No comments:
လျှော့တွက်လို့မရတဲ့ ရိုဟင်ဂျာအရေး၊ သတိထားမည့်မွတ်ဆလင်နိုင်ငံများ
ရခိုင်ပြည်နယ်က မူဆလင်ရိုဟင်ဂျာတွေကို မြန်မာအစိုးရက လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုတွေ ကျူးလွန်နေတယ်လို့ ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား အစိုးရက မနေ့က စွပ်စွဲပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဆော်ဒီအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့သဘောထားကို အစိုးရသတင်းဌာန SPA က ပြောဆိုရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံက မူလဆင်ရိုဟင်ဂျာတွေကို မြန်မာအစိုးရက ရက်စက်စွာတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေပြီး၊ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုတွေ ကျူးလွန်နေကြောင်း ၊ ဆော်ဒီအစိုးရအနေနဲ့ပြင်းထန်စွာ ရှုံ့ချကြောင်း ပြောဆိုတယ်လို့ သိရပါတယ်။
At 8/08/2012 11:33:00 AM2comments:
မြန်မာ facebook Password များခိုးယူရန် ရည်ရွယ်ပြီး Izara Aishah ဆိုသူမှ Facebook Link အတုများ ပေးပို့လျက်ရှိ
ဘင်္ဂါလီ သတင်းမှားများကို လွဲမှားစွာ ယုံကြည်နေကြသော အစွန်းရောက် မွတ်စလင် ဟက်ကာ များမှ မြန်မာ နိုင်ငံ အစိုးရ ၀ဘ်ဆိုက်များ၊ မြန်မာ ပြည်တွင်ဂျာနယ်များ ၀ဘ်ဆိုက်များကို တိုက်ခိုက်လျှက်ရှိပါသည်။ သာမန်မြန်မာ ပြည်သူများ၏ Email များ၊ Facebook Account များ၏ Password များကိုလည်း ရယူဖို့ ကြိုးစားနေကြပါသည်။ ယခု အခါ Izara Aishah (https://www.facebook.com/IzaraAishahOffical) မှ Is this your? http://ehberita.allalla.com/ အင်တာနက်လိပ်စာပါဝင်သော facebook message များ ပေးပို့လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ မြန်မာပြည်မှ Facebook အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် အဆိုပါ http://ehberita.allalla.com/ ကို ဖွင့်မကြည့်ရရန် သတိပေးအပ်ပါသည်။ အဆိုပါ လိပ်စာမှာ Facebook Login ကို အတုပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မိမိ Facebook username နှင့် password ကို အဆိုပါ Facebook Page အတု တွင် ရိုက်ထည့်မိပါက မိမိ password ပါသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ Facebook user များအနေဖြင့် မိမိ ၀င်ရောက်မည့် Facebook (or) Gmail စာမျက်နှာ များအား ပုံမှာ ပြထားသည့် အတိုက်း Address (or) URL အား သေချာစွာ ကြည့်ရှု့ပြီးမှာ ၀င်ရောက် ကြပါရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။
At 8/08/2012 10:13:00 AM3comments:
အီဂျစ် နိုင်ငံမှာ ရှိနေ တဲ့ ကျွန်တော် တို့ရဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံ သံရုံး ထဲကို ၀ င်ေ ရာ က် ပြီး မြန်မာ နိုင်ငံတော် အလံ ကို ဖြုတ် ချပြီး မီးရှို ခဲ့တဲ့ လုပ်ရပ် တစ်ခု ၂၀၁၂ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၆)ရက်နေ့က အီဂျစ်မှာ ဖြစ်ပွား ခဲ့ပါတယ် ခင်ဗျာ….။ ဒါနဲ့ ပတ် သက် လို့  မြန်မာ နိုင်ငံသူ၊ မြန်မာ နိုင်ငံသား အပေါင်း တို့  သိရှိ စေဖို့နဲ့ ကျွန်တော် တို့ လုပ်ရမယ့် အ လုပ် ကို သိစေချင် လို့ ခုလိုမျိုး အိတ်ဖွင့် ပေးစာ ရေးသား ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
At 8/08/2012 09:29:00 AM No comments:
အဲဒီကလေးတွေကို ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့ ည (၉) နာရီက ဖမ်းဆီးပြီးတဲ့နောက် စည်ပင်လူကြီး ၆ ယောက်နဲ့ဆိုင်ကယ်စီးရဲ အယောက် ၂၀ လောက်က စည်ပင်အမှိုက်သိမ်းကားထဲမှာ စုပြုံထည့်ပြီး ခေါ်ဆောင်သွားတာလို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီနောက် ဓာတ်ပုံရိုက်ယူပြီး မိဘနာမည် မေးမြန်းခဲ့တယ်လို့ ကလေးတွေက ပြောပါတယ်။ပဲခူးတိုင်း ပြည်မြို့ မြကွမ်းတောင် ဘုရားဝင်းအတွင်း ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ ကရုဏာလက်များ ကွန်ယက် စာသင်ကျောင်းမှာ ပညာသင်နေတဲ့ အခြေအနေမဲ့ ကလေး အယောက် (၄၀) လောက်ကို ဒေသခံ အာဏာပိုင်တွေက ဖမ်းခေါ်သွားပြီး ပြည်မြို့နဲ့မိုင်(၁၀၀) ကျော် ဝေးတဲ့ ဥသျှစ်ပင် တောနက်ကြီးထဲမှာ သွားရောက် စွန့်ပစ်လိုက်တယ်လို့ RFA က စုံစမ်းသိရပါတယ်။
At 8/08/2012 08:51:00 AM No comments:
အခါတစ်ပါး၌ လူငယ် တစ်ယောက်သည် မြတ်စွာဘုရားထံသို့ ချဉ်းကပ်၍ “အကျွန်ုပ်သည် မည်သည့် အရာကိုပဲ လုပ်လုပ် မအောင်မမြင် ဖြစ်နေပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့် မအောင်မမြင် ဖြစ်ပါသနည်း” ဟု မေးလျှောက်သည်။“ အသင် သည် အလှူဒါန မပြုတတ်၍ ဖြစ်သည်” ဟု မြတ်စွာ ဘုရားက ဖြေကြားတော်မူသည်။ငွေကြေး တစ်ပြား တစ်ချပ်မှ မရှိသော ဆင်းရဲသား အကျွန်ုပ်ဖို့ မည်ကဲ့သို့ အလှူဒါ နပြုနိုင်ပါမည်နည်း။‘ အသင် ဤသည်ကို မှတ်သားလော့။ တစ်ဦး တစ်ယောက်သော သူသည် ငွေကြေး မရှိသော်လည်း ပေးကမ်းနိုင်သော အလှူဒါန ခုနှစ်မျိုး ရှိသည်။
At 8/08/2012 08:46:00 AM2comments:
ကချင်ပြည်နယ်မှာ တရားမဝင်တရုပ်လူမျိုးတွေ ထောင်နဲ့ချီအခြေချနေပြီလို့ လူဝင်မှုအရာရှိပြောဆို
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း တရားမဝင် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် အခြေချနေထိုင်သူ အများစုဟာ တရုတ် လူမျိုးတွေဖြစ်ပြီး၊ အခုဆိုရင် တရားမ၀င် ၀င်ရောက်နေထိုင်တဲ့ တရုတ် လူ မျိုးေ တွ ထာင်နဲ့ချီ ရှိနပြီလို့ ကချင်ပြည်နယ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေး ဦးစီးဋ္ဌာနက ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ လတ်တလော ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း နယ်မြေမလုံခြုံမှုကြောင့် တရားမ၀င် ခိုးဝင်နေထိုင်သူတွေကို ကြပ်ကြပ် မတ်မတ်ဖော်ထုတ် စစ်ဆေးအရေး ယူဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း မရှိသေးတဲ့ အတွက် အနီးစပ်ဆုံးသာ ခန့်မှန်းပြောဆိုရတာ ဖြစ်တယ်လို့ အဲ့ဒီဋ္ဌာနရဲ့ ညွန်ကြားရေးမှူး ဦးကြည်လင်က အခုလ (၄) ရက်နေ့က မြစ်ကြီးနားမြို့မှာ ကျင်းပတဲ့ ကချင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ်နဲ့ လူထုတွေ့ဆုံပွဲမှာ ပြောကြားခဲ့တာပါ။
At 8/08/2012 08:42:00 AM No comments:
ရိုဟင်ဂျာတွေကို သတ်ဖြတ်နေဟု မြန်မာကို ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားက စွပ်စွဲ
ရခိုင်ပြည်နယ်က မူဆလင် ရိုဟင်ဂျာတွေကို မြန်မာအစိုးရက လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်မှုတွေ ကျူးလွန်နေတယ်လို့ ဆော်ဒီ အာရေးဗီးယား အစိုးရက မနေ့က စွပ်စွဲပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဆော်ဒီအစိုးရ အဖွဲ့ရဲ့ သဘောထားကို အစိုးရသတင်းဌာန SPA က ပြောဆိုရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံက မူလဆင် ရိုဟင်ဂျာတွေကို မြန်မာအစိုးရက ရက်စက်စွာ တိုက်ခိုက်မှုတွေ ရှိနေပြီး၊ လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်မှုတွေ ကျူးလွန်နေကြောင်း ၊ ဆော်ဒီအစိုးရ အနေနဲ့ ပြင်းထန်စွာ ရှုံ့ချကြောင်း ပြောဆိုတယ်လို့ သိရပါတယ်။
At 8/08/2012 08:39:00 AM No comments:
နယူးဒေလီ(မဇ္ဈိမ) ။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှ လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခများ အတွင်း ရိုဟင်ဂျာ မူဆလင် များ သေ ဆုံးခဲ့ရမှုနှင့် ပတ်သက်၍ လေးနက်စွာ စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်း ပါကစ္စတန်သမ္မတ Asif Ali Zardari က မြန်မာသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ထံ အင်္ဂါနေ့က စာရေးသား ပေးပို့လိုက်သည်။သမ္မတ Zardari ၏ စာထဲတွင် ပြန်လည်နေရာချထားရေး လုပ်ငန်းစဉ်အား မြန်မြန်ထက်ထက် ဆောင်ရွက်ရန်တောင်းဆိုထားပြီး သို့မှသာ ရိုဟင်ဂျာများ ၎င်းတို့ နေအိမ်များသို့ ပြန်သွားကာ လုံခြုံစိတ်ချရ သည့်ဘဝသို့ ရောက်ရှိစေ မည်ဟု ပါရှိကြောင်း ပါကစ္စတန် အေပီ သတင်း တပုဒ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
At 8/08/2012 08:33:00 AM2comments:
၈.၈.၂၀၁၂ ရက်နေ့ သတင်းများ
- ၈ လေးလုံး ရက်သတ္တပတ် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ၏ လှုပ်ရှားမှုများ click
-မော်တော်ယာဉ် ထိန်းသိမ်းရေးကောလိပ် ရန်ကုန်တွင် ထူထောင်မည်ဟုဆို click
- ဆန္ဒပြဈေးသည် (၁၁) ဦး အာမခံနဲ့ ပြန်လွှတ် click
- ကင်တားနား မဲဆောက်ရောက် click
-ရိုဟင်ဂျာတွေကို အကူအညီပြန်ပေးခွင့်ပြုဖို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို ကုလသမဂ္ဂ တိုက်တွန်း click
-တူရကီ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ရန်ကုန်လာ click
- မန္တလေးမှာ ဈေးသည်တွေ ဆန္ဒပြ၊ သုံးဦး အဖမ်းခံရ click
- ကလေးတွေကို ပြည်အာဏာပိုင်တွေက တောနက်ထဲမှာ သွားရောက် စွန့်ပစ် click
- အီဂျစ်ရှိ မြန်မာသံရုံးအလံကို ဆန္ဒပြသူတို့ ဖြုတ်ချ၊ မီးရှို့ (ရုပ်သံ) click
- ၈ လေးလုံး အခမ်းအနားအတွက် ၀န်ကြီးများ ငွေလှူ click
- ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ ရှစ်လေးလုံး အခမ်းအနားအတွက် အလှူငွေပေးအပ် click
- ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ၂ ဦးက ၈ လေးလုံး အခမ်းအနားအတွက် ပထမဆုံးအကြိမ် ငွေလှူ click
- ရှစ်လေးလုံးနှစ်ပတ်လည် ပြင်ဆင်နေစဉ် ၀န်ကြီးတွေ လာအားပေး click
At 8/08/2012 08:32:00 AM No comments:
ရန်ကုန်မီဒီယာဂရု ၀ဘ်ဆိုက် အတိုက်ခံရ
From - ရန်ကုန်မီဒီယာဂရုပ်
ရန်ကုန်မီဒီယာဂရုပ် ပရိတ်သတ်များခင်ဗျား ရန်ကုန်မီဒီယာဂရုပ်ရဲ့ website www.yangonmedia.com ဟာ ဒီနေ့မှာ အခြားသော အွန်လိုင်း hacker များရဲ့ attack လုပ်ခြင်းကို ခံရပါတယ် သို့ဖြစ်ပါ၍ မိမိတို့ website ကို လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ များပြန်လည်လုပ်ဆောင် နေခြင်း ဖြစ်တဲ့အတွက် ယခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ ခေါ်ယူကြည့်ရှု၍ မရနိုင်သေးကြောင်း (ရံဖန်ရံခါရလိုက်မရလိုက်ဖြစ်နေပါသည်) လေးစားစွာ အသိပေးအပ်ပါတယ် အမြန်ဆုံးအသုံးပြု၍ ရနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ယခုဖြစ်ပေါ်မှု သည် “ကုလသမဂ္ဂ၏ အထူးကိုယ်စားလှယ် ကွင်တားနား၏ ရခိုင်အရေးသုံးသပ်ပြောဆိုချက်များ လုံးဝလက်မခံ” ဟူသည့်
At 8/08/2012 08:19:00 AM No comments: